१२ बर्षमै दुनिया चकित पार्दै दाङका यी भाइ, हेर्नुहोस् यस्तोसम्म गर्न सक्छन् (भिडियोसहित)
July 3, 2020 1505
गाँउदै र बजाउदै हिड्ने सा’रङगी दाईहरु हिजो आज गाँउ शहरमा देखिन्न छाडेका छ’न । आ’कल झुक्कल देखिने यस्ता सारङगी बाद’कहरु आफ्नो पेशा’मा अडिन नस्कनु नै मुख्य समस्या भएको छ ।
पहिले सारङगी बजा’उनेलाई क’लाकारको रु’पमा हेरीए पनि अहिले भने गन्धर्भह’रुलाई त्यति वास्ता नगरिएको गन्धर्भहरुको भनाई छ । तर सारङगी बाजा संरक्षण गर्न सके य’सको संरक्षण हुन सक्ने वि’श्वास भने गन्धर्भहरुलाई छ ।
आधुनिक प्रवि’धिको बढ्दो प्रयोगले सार’ङगी रेटेर जिविकोपार्जन गर्ने पेशा लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ । दांगका बिरा’ज गन्धर्व जो दाङ्गमै यसरि कलाले मोहित पारि’रहेका छन् | आमा बुवा अशक्त भएपछि उनीहरुलाई पाल्न कमाउनका लागि काठमाडौंमा आए ।
बिद्या’लय जाने उमेरमा बाटो र गाडी’मा सारंगी बजाउँदै हिड्ने यि भाई पनि स्कुल जान चाह’न्छन् तर पढाउने कस्ले ? अशोक दर्जी जस्तै ठुलो गायक बन्न चाहन्छन्, बिराज र जनक । आमा बुवा’लाई सुख दिन चाहन्छन् । हेर्नुहोस भिडियोमा….
Prevसाउदीमा एक नेपालीको निधन, मृ’त्युअघि गरेका थिए यस्तो आग्रह
Nextगायक राजु परियार र टिका पुनको दोहोरी घमसाघम्सी (भिडियोसहित)
जितेको सुन्नै नपाई बिते अटलबहादुर, छोरा भन्छन्: बुवालाई जित्दैछु भन्ने थाहा थियो तर खबर सुन्न पाउनुभएन
कोरोनाले नेपालमा आज ४ जनाको मृ त्यु, यी जिल्लाका हुन् मृत’क: